ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन तयार भए १० बुँधेका पक्षधार, रावल र भुसालले पाउने भए यस्तो पद ! – GALAXY
ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन तयार भए १० बुँधेका पक्षधार, रावल र भुसालले पाउने भए यस्तो पद !
काठमान्डौ – विधानअनुसार दसौं महाधिवेशनबाट १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ४ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, १ उपमहासचिव र ७ सचिव गरी १५ पदाधिकारी निर्वाचित हुनेछन् । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचितमध्ये १२ पदाधिकारी अहिले एमालेमा छन् । हाल कायम रहेका सबैजसो पदाधिकारी पदोन्नति हुने वा नभए सोही पदमा दोहोरिन चाहेका छन् ।
ओलीको प्रयास जटिल बन्दै